“अवको ६ महिना भित्रमा भिमअस्पताललाई स्तरोन्नती गराउने लक्ष्य लिएको छु“ भण्डारी - GBM
२०७८ जेष्ठ १०, सोमबार ११:०८ गते gautam buddha sandesh	0 Comments
भिम अस्पताल रुपन्देहीको जेठो अस्पताल हो । यस पछी स्थापना भएका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुले सेवाको स्तर,भवनको स्तर साथै बेड क्षमतामा धेरै अगाडी बढी सकेका छन तर भिम अस्पतालले न त आफ्नो सेवामा विस्तार गर्न सक्यो न त स्तरोन्नती । बर्तमान अवस्थाको कुरा गर्दा कोभिड महामारीको यस्तो अवस्थामा बेड क्षमता थोरै भए पनि सेवामा भने कुनै कसर बाकी राखेको छैन भिम अस्पतालले । यस्तो अवस्थामा भर्खरै मात्र प्रदेश सरकार ,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भिम अस्पतालमा करीब २ बर्ष देखी रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा भैरहवाका समाजसेवि नारायण प्रसाद भण्डारीलाई मनोनित गरेको छ । भिम अस्पतालको सेवा सुविधा, बर्तमान अवस्थामा भिमअस्पतालले खेलेको भुमिका लगायतका विषयमा भिम अस्पतालका नव नियुक्त अध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारी संग गौतम बुद्ध सन्देशका लागि गोपाल बन्जाडेले गरेको कुराकानीको अँश :
तपाई भखैरै मात्र प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट भिमअस्पताल भैरहवाको अध्यक्ष पदमा मनोनित हुनु भएको छ । कोभिडको संक्रमणको यो महामारीमा तपाईको मनोनयन लाई कसरी लिनु भएको छ चुनौती वा जनताको सेवा गर्ने अवसर?
सर्ब प्रथम त मलाई भिम अस्पतालको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने प्रदेश सरकारलाई धन्यबाद दिन चाहन्छु । यस्तो अवस्थामा मलाई जसरी प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको छ मैले वास्तवमा भन्नु पर्दा यसलाई यहाका जनताको सेव गर्ने अवसरका रुपमा लिएको छु । तपाईले भने जस्तो चुनौती पनि नभएको होईन म यी सबै चुनौतीलाई सहर्ष स्विकार्दै जनताको सेवागर्ने प्रतिबद्धताका साथ पदभार ग्रहण गरेको हुँ ।
तपाईले यस्तो अवस्थामा कार्यभार सम्हाली रहदा भिम अस्पताल भित्रका राम्रा तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु बारे केही अध्ययन गर्नु भएको छ ?
मैले औपचारीक रुपमा जेठ ४ गते पदभार ग्रहण गरेँ । यद्यपी त्यस अगाडी पनि म अस्पताल आउने जाने यहाँका गतिविधीहरु नियाल्ने नगरेको भने होईन । जुन रुपमा अहिले कोभिडको महामारी संग जनता लडिरहेका छन त्यसमा भिम अस्पतालका चिकित्सकहरु , स्वास्थ्यकर्मीहरु,कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो बलबुताले भ्याए सम्म सेवा दिईरहनु भएको छ । बेड अपुग हुदा पनि यहाबाट विरामीलाई निराश बनाएर पठाउनु भएको छैन । त्यो नै बर्तमान अबस्थाको सकारात्मक कुरो हो । अव सुधार गर्न पर्ने त धेरै छन म वाहिर बसेर पनि निहाली रहेको कुरा हो ,अस्पताललाई १०० बेड क्षमताको बनाउने, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या साथै क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, लगायतका कुराहरु छन त्यसलाई म अवश्य पनि सम्बोधन गर्ने छु ।
भिम अस्पताल गत बर्ष देखी कोभिड अस्पतालको रुपमा पनि रहेको छ । अस्पतालको हालको क्षमता कति हो ?
कोभिडका विरामी राख्ने भनेर गत बर्ष देखी आईसीयु, आईसोलेशन गरि २५ बेडको व्यबस्था गरिएको थियो तर अहिलेको अवस्थामा कोभिडका विरामी अत्याधिक भएको हुदा ईमरजेन्सी,ईन्डोरका सबै बेडमा कोभिडका विरामी राखेर उपचार गरेका छौँ । त्यसमा यहाँका चिकित्सक, मेसु,स्वास्थ्यकर्मी प्रशासन सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।
अक्सिजन भएन , भिम अस्पतालले हात उठायो भन्ने हल्ला पनि आयो वास्तविकता केहो ? वताइृदिनुस न ।
विरामीको अत्याधिक चाप भएको कारणले अव अक्सिजन नपुग हुन्छ कि भन्ने सम्म भएको हो तर भिम अस्पतालले उपचार गर्न नसक्ने भनेर हात उठाएको छैन र उठाउने पनि छैन । किन भने सरकारी स्तरबाट पनि अक्सिजनको व्यवस्था भएको र यहाँका समाजसेविहरुले पनि भिम अस्पताललाई अक्सिजन लगायतका कुरामा धेरै साथ र सहयोग गर्दै आउनु भएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा भिम अस्पतालमा मानविय स्रोत र साधन पर्याप्त छ कि छैन?
मैले यहाँका जनतालाई नढाटी भन्नु पर्छ जुन रुपमा कोभिडका विरामी भर्ना हुने क्रम छ त्यसलाई धान्ने मानविय स्रोत भिम अस्पताल संग छैन तर पनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले दिनरात ड्युटी गरेर स्वास्थ्यकमीृ र चिकित्सकको कमी हुन दिनु भएको छैन । उहाँहरु धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । अव छिट्टै नै हामीले प्रयाप्त कर्मचारी माग गर्ने छौ ।
ईन्डोरका सवै बेड र वार्डलाई आईसोलेशन वार्ड वनाउने तर्फ केही सोच्नुभएको छ ?
मैले अगाडी नै भने कि अहिले भिम अस्पतालका सबै वार्ड र बेडमा कोभिडका विरामी हुनुहुन्छ र उहाहरुको उपचार भईरहेको छ । सामान्य विरामीलाई हामीले मेडिकल कलेज संग सहकार्य गरेर त्यहाबाट उपचारको व्यवस्था मिलाउदै छौँ ।
भिम अस्पताल रुपन्देहीको जेठो अस्पताल हो । यो भन्दा पछि स्थापना भएका अस्पतालहरुले धेरै फड्को मारिसकेका छन । भिम अहिले सम्म कागजी रुपमा २५ बेड भन्दा माथि जान सकेन। आएका सबै अध्यक्षहरुले १०० बेड बनाउने प्रतिवद्धता यहाका जनता संग गर्नुभएको थियो । यति सम्म कि यो क्षेत्रले स्वास्थ्य मन्त्री समेत नपाएको हेन तर पनि स्तरोन्नती हुन सकेन। यसबारे तपाईको धारणा के छ र यो ३ वर्ष भित्रमा तपाईले अस्पताललाई १०० बेडमा लैजानु हुन्छ ?
तपाईले एकदम राम्रो प्रश्न उठान गर्नु भयो , भिम अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्री पनि पायो तर स्तारोन्नती हुन सकेन। मैले ३ बर्ष हैन अवको ६ महिना भित्रमा भिमलाई स्तरोन्नती गराउने लक्ष्य लिएको छु ।त्यो जनताले मुल्याँकन गर्नेछन ।मेरो यो आश्वासन मात्र हैन प्रतिबद्धता हो ।
कोभिडको यो महामारीमा पनि रात दिन खटीनुभएका चिकित्सक, मे.सु, स्वास्व्थ्यकर्मी सबैलाई हृदय देखी नै धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस विषम परिस्थितीमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सहयोगी हातहरुलाई कदापी भुल्न सकिदैन । त्यस्तै भिम अस्पतालको आकस्मिक सेवा प्रदान गर्नका लागि भवन निर्माण देखी अन्य सहयोग गर्ने लिलाराम न्यौपाने प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
← जनमत पार्टीको आयोजनामा भैरहवामा रक्तदान
कोरोना नियन्त्रणका लागि विकास बजेट कटौती गर्न तयार छौँ →
यस क्षेत्रको समग्र विकासको लागि मैले उम्मेदवारी दिएको छु ।
२०७४ मंसिर १७, आईतवार ०४:५६ गते २०७४ मंसिर १७, आईतवार ०४:५८ गते gautam buddha sandesh	0
काम गर्ने संस्थाको रुपमा क्लबलाई स्थापित गर्नेछौं
२०७४ आश्विन २२, आईतवार ०१:३८ गते २०७४ आश्विन २२, आईतवार ०१:४१ गते gautam buddha sandesh	0
‘स्वार्थमा कार्यालय सारिनु हुँदैन’
२०७५ माघ १५, मंगलवार १२:२६ गते २०७५ माघ १५, मंगलवार १२:२७ गते gautam buddha sandesh	0